Kitapo che cheseur 20 litatra ao amin'ny orinasa mpanamboatra boaty | Kaiguan
Ny cheentuers dia ampiasaina amin'ny ranon-dronono sy viscous.
Ary azo ampiasaina amin'ny sakafo sy zava-pisotro, toy ny purees, saosy, vinaingitra, sake Japoney, ronono, ranom-boankazo, divay, labiera, sns.
Izy io dia afaka mametraka akora simika, ao anatin'izany ny adhesives, fambolena, detergents, inks, lubricants, loko, coatings, solika, ranon-javatra zezika, diluent, sanitizer, alikaola, disinfectant asidra hypochlorous, diluent, gel ultrasound, reagent hematology sns.
Ny kosmetika sy ny kojakoja manokana, toy ny mpanadio, shampooing, savony ranon-javatra, famafana, losion dia miasa tsara ao anaty kitapo cheetaher form-fit.
Fampihenana be ny fanjifana plastika raha oharina amin'ny kaontenera henjana.
Ny boaty baoritra dia mamela ny velarana midadasika ho an'ny fifandraisana sary.
Ny Cheiguroer dia tsy ny kitapo anaty boaty mahazatra anao. Izy io dia manome ny mpanjifa famolavolana fonosana izay mihoatra ny fananganana ondana amin'ny famoahana sy fampiasana. Namboarina mba hamorona endrika boaty, Cheetaher misy patanty dia miavaka amin'ny famolavolana sy ny fananganana azy. Namboarina niaraka tamin'ny gusset sisiny izay "form-fit" ho an'ny kaontenera, ny Cheiguroer dia mamela ny famoahana maimaim-poana tanteraka.
Ny boaty dia namboarina manokana. Satria vita amin'ny baoritra izy io dia azo atao pirinty ny lafiny rehetra, izay manome faritra lehibe amin'ny sehatry ny fifandraisana sy ny dokam-barotra.
Previous: 2020 vidiny ambongadiny Collapsible Water Cube Container Foldable Water Tank - BPA Free Collapsible Water Container (miaraka amin'ny Spigot) - Kaiguan
Manaraka: Kaontenera azo ahetsiketsika BPA maimaim-poana (miaraka amin'ny Spigot)